FAKE , FAITH – fgamyanmar.org
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fgamyanm/public_html/wp-content/themes/alone/theme-includes/helpers.php on line 1968
Full Time Pastors
Bible School (FGBTC)
FAKE , FAITH
Homepage Written by Steve Roberts FAKE , FAITH
ဗျာဒိတ်ရူပါရုံဟူသည်မှာ ယုံကြည်သူတွေဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြလျှင် ထိုခံ.ူချက်မှာ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး၏ နှလုံးသားမှ ဖြစ်တည်လာရမည်ဟူသော အချက်ကို အရင်ဦးဆုံးဆွေးနွေးလိုပါသည်။ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကို ကြုံတွေ့ကြရသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်နှင့် သဏ္ဍာန်တူလာအောင် အခြေခံကျကိ ပြောင်းလဲပုံသွင်းပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် နှုတ်ပါးစပ်ဗေဒ (Mouthology) တည်းဟူသော မိုက်မဲသောယုံလွယ်သူ နှုတ်ပါးစပ်ဖျားမှ ထွက်လာသည့်ဆန်းပြားလွဲမှားသောအယူဝါဒများသည် လူအများအား လွှမ်းမိုးနေပြီး ထိုအရာအား သမ္မာတရားပိုင်းဖြတ်မှုမပါပဲ မှားယွင်းစွာ မျိုချနေကြခြင်းကို တွေ့နေရသည်။ အသံကျယ်ကျယ်ဟစ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်၊ အံ့ဖွယ်အမှုကို ယုံပါသည်၊ ဥစ္စာဓနဆိုင်ရာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ယုံပါသည်၊ ခရစ်တော်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းမှ ဆွဲထုတ်ရယူနိုင်သော ကောင်းချီးမင်္ဂလာမှန်သမျှကို ယုံသည်ဟု ၀န်ခံ၊ ဖော်ထုတ်ကြသည်။ သို့သော် နေ့စဉ်အသက်တာတွင်မူ ပြစရာအထောက်အထား နဲနေကြသေးသည်။
ယနေ့ ယုံကြည်ခြင်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်နေသောအရာများကို စိတ်စွဲခြင်းသည် အဆုံးမသတ်နိုင်သောသံသယစိတ်တွေအား ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းလော ဟုပင်ထင်မြင်မိပါသည်။ အသံကျယ်၊ ကြာကြာလေးအော်ပေးလိုက်လျှင် ငါ့ယုံကြည်ခြင်းကို ငါစိတ်ချနိုင်ကောင်းရဲ့လားဟု တစ်ချို့ကထင်နေကြမည်။
ထိုအရာများ ချုပ်ငြိမ်းသွားမည့်အချိန်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ငြိမ်ဝပ်အေးချမ်းမည့်အချိန်၊ တစ်ချိန်ချန်တွင် ရောက်လာဦးမည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ရှုပ်သောအရာသည် ယုံကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းပင် ဟူသောစိတ်ခံစားမှု မျိုးများသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအား ပျက်စီးစေပါသည်။
ဘုရားဂတိတော်များအား ၀န်ခံဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ထိုဂတိတော်များအားခံစားရန် ဟူသည်မှာ စိတ်ရှည်ခြင်းသည် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် နှုတ်ပါးစပ်ဗေဒ ဟူသောအရာနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်သောအရာပင်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဂတိတော်တွေအား ဖော်ထုတ်ဝန်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပေ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရား၊ပေးစပ်စတေးခံခြင်းတရားနှင့် ဝေးနေသောကြောင့် ခပ်ပေါ့ပေါ့ ၀န်ခံနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
ခပ်ပေါ့ပေါ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဖောင်းပွလာခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော မျှော်လင့်ချက် ဆန္ဒအိပ်မက်များအား ဖော်ထုတ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဤကဲ့သို့သော ခေတ်မမီ၊ ရိုးအီနေတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ထားရစ်ခဲ့ရပါမည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ရေပန်းစားနေသော ၀ိညာဉ်ရေးဆန်ဆန် (၀ိညာဉ်ရေးအမြဲစံနေပံပေါက်သော) အတွေးများဝန်ခံဖော်ထုတ်နေခြင်းအားဖြင့် ဖန်ဆင်းရှင်ကို မလှိမ့်တပတ်လုပ်နေကြသည်။
ယနေ့ခေတ်ပေါ် ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားသည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး၊ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ကာ စကားလုံးအပြည့်ထည့်ထားသော ပါးစပ်များနှင့် ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေမည်ဆိုလျှင် အလွန်သနားဖွယ်ကောင်းနေပါမည်။ နှုတ်ပါးစပ်ဗေဒ ဆိုသည်မှာ အတုယောင်ယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ ဒါကို စာတန်ကော၊ ဘုရားသခင်ကပင် သိနိုင်ပါသည်။ နှုတ်ပါးစပ်ဗေဒသည် တန်ခိုးကင်းမဲ့သည်။ အသီးပွင့်လဲမရှိပါ။ အချိန်ကိုလည်း အလဟသ ဖြုန်းတီးနေခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများအနေဖြင့် ဒီလိုမဖြစ်သင့်ပါ။
အတုယောင်ယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်ကြုံဖူးသလို မိတ်ဆွေလည်း ကြုံဖူးမည်ထင်၏။ ဒီအရာသည် ဆုလဒ်အောင်မြင်မှုများ ကို ဘုရားသခင်ဆုချပေးမှာပဲ ဟူသော အတွေးဖြင့်အမှုတော်စတင်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင်ပင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ့်ဘက်က နတ်ဘုရားကျေနပ်အောင်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်လျှင်နတ်သားလေးက စည်းစိမ်ဥစ္စာချပေးမယ်ပေါ့။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကြီးအလျှံအပယ်နှင့် ပေးတော်မူမည် ဟူသည်မှာ မမေ့သင့်သော်လည်း ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ အမှုတော်ထမ်းခြင်းသည် ထိုကောင်းကြီးအားရည်ရွယ်ခြင်းမျိုးနှင့်သာဆိုလျှင် အတုအယောင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နှုတ်ပါးစပ်ဗေဒကို လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အတုအယောင်ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့မွှန်းကြပ်စေပါသည်။ အခြေအနေမကောင်းလျှင်လည်း ချက်ချင်းမျက်နှာပျက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ ငယ်သံပါအောင် အော်တတ်ပါသေးသည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဟူမူကား အခြေနေဘယ်လောက်ပင်ဆိုးဝါးနေပါစေ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်သည်။ အတုအယောင်ယုံကြည်ခြင်းတွင်လည်း ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာရှိသည်။ သို့သော် ထိုဆုတောင်းချက်မျိုးသည်အရေးပေါ်ချိန် (သို့မဟုတ်) ကောင်းကြီးများများထပ်ရလိုသော အခြေအနေမျိုးမှာပင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်နှင့်ပင် မိဿဟာယဖွဲ့ရန်မေ့သော်လည်း ကျွန်ုတို့သည် ကောင်းကြီးကိုတော့ မျှော်လင့်ကြသည်။ ကိုယ်တော်ဟာ ကျွန်ုတို့ရဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသိုက်၊ ဘ၀အောင်မြင်မှုအတွက် အသုံးအဆောင်တစ်ခု၊ လက်စွဲကရိယာတစ်ခု ဖြစ်သွားရပါတော့သည်။ ဘုရားသခင်ကို လိုတရ “ဥံဖွ” ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သာထားကြလေတော့သည်။
ရွေ့လျော့ပျိုလဲနေသော ကမ္ဘာကြီးတွင် ဖြစ်ပျက်နေသော အမှန်တရားတစ်ခု ပြောချင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ ချစ်သောသူတွေနှင့် မိမိကိုယ်တိုင်တွင် မကောင်းသောအမှုများကြုံကြရပါသည်။ စိတ်ထိခိုက်မှု၊ အနာတရဖြစ်မှု၊အလုပ်လက်မဲ့မှု၊ သေကြေပျက်စီးမှု၊ အပြစ်မဲ့သူ ရက်စက်စွာခံရမှုဟူသောအရာက ကျွန်ုတို့အားဝိုင်းနေပါသည်။ ကျွန်ုတို့ဝိညာဉ်ရေးဘယ်လောက်ပဲ ပြည့်နေပါစေ၊ ယုံကြည်ခြင်းတပ်စခန်းချထားနိုင်ပါစေ ထိုအရာများနှင့် မကင်းလွတ်နိုင်ပါ။ ဆူနာမီ၊ ငလျင်၊ ဟာရီကိန်း၊ ရေကြီးခြင်းများ မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အတုအယောင်ယုံကြည်ခြင်းက ဘုရားသခင်ဟာ သူ့တရားကို အဆုံးအထိ နိုင်ဘူးလို့ အပြစ်ဖို့နေကြပါပြီ။ ယုံကြည်ခြင်း မလုံလောက်လို့၊ မဟုတ်တာ တစ်ခုခုလုပ်လို့ ဘုရားက သင်္ခန်းစာပေးချင်လို့ ဆိုပြီး အသံတွေထွက် လာကြပါတော့သည်။
ထိုအသံတွေကြောင့် ဘုရားသခင်အား မကျေနပ်သောစိတ်၊ ဒေါသစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ဘုရားသခင်ပြစ်ဒါဏ်ပေးခြင်းလား၊ အရေးမစိုက်ခြင်းလား၊ မချစ်တော့လို့လား၊ ဒီအမှုကို ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုသလဲ။ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ နှင့်ပေါ့။ ဒီလိုနှင့် ဘုရားကို မယုံကြည်နိုင်တော့ခြင်း၊ နာကြည်းခံပြင်းနေသူဖြစ်ခြင်းအခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်လာပါတော့သည်။ ဘုရားသခင်တကယ်ရှိရဲ့လား ဟူသော သံသယစိတ်ဝင်လာပါပြီ။ကောင်းပါပြီ . .ယခုသင်ယုံကြည်နေသည်ဟု ထင်မှတ်ထားသော နတ်ဘုရားအား သင်၏ သံသယမျက်စိဖြင့် ကြည့်တတ်ဖို့ လိုအပ်နေပါသည်။
သို့သော်. . . စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် တကယ်ရှိပါသည်။ အတုအယောင်ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သယောင်ထင်ရသော်လည်း အကြမ်းမခံပါ။ ကျွန်ုတို့ရရှိသင့်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်း၊ အသုံးတည့်သော ယုံကြည်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ယုံကြည်ခြင်း၊ ဝေဒနာခံစားတဲ့ ယုံကြည်ခြင်း၊ ပေးဆပ်စတေးခံနိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ တုံးသွားနိုင်မည့်အခြေအနေတွင်ပင်လျှင် ထက်မြဲ ထက်နေသော အရာနှင့် တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာပင်ဖြစ်သည်။ ထက်မြဲထက်နေရုံမကလို့ အကြမ်းပတမ်းသုံးလေ ထက်လေဖြစ်ရပါမည်။ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုတို့လှုပ်ရှားများကြားမှာပင်လျှင် ဘုရားသခင်နှင့် နီးစပ်စေပါသည်။
စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည် နေ့စဉ်အသက်တာတည်းဟူသော သတ္တုအရည်ကျိုအိုးထဲက မီးဖုတ်ပုံသွင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ယုံကြည်ခြင်းကော
မည်ကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသနည်း၊ ဘယ်လိုယုံကြည်ချင်းမျိုးကို သင်လိုချင်ပါသနည်း။
မာရ်နတ်ပစ်သော မီးစက်လက်နက်ကို ကာသတ်နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသော လွှားကိုလည်း
ခပ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ် ထပ်ဆင့်၍ ယူဆောင်ကြလော့။ (ဧဖက်-၆း၁၆)
FGBTC 10th Anniversary Magazine (1996-2006) Magazine
မှ (အလွန်ကောင်းသောကြောင့် မြန်မာအမြင်နှင့် အဆင်ပြေပြေဖတ်နိုင်ရန်
Alone on Black spots with yellow background
Alone on A cat drawing ofachild
Alone on Abstract oil paintings
Articles Mission Rev Vung Za Niang
အမွေစားအမွေခံ Tuesday, 5, Jun
FAKE , FAITH Tuesday, 22, May
လားရှိုးသာသနာ Friday, 18, May
ဘုရား၏မျက်မှောက်တော်ဆိုသည်မှာ ဘုရားအတူရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားအတူရှိလျှင် အရာရာသည် မဖြစ်နိုင်တာမရှိ၊ မတတ်နိုင်တာမရှိပါ။ ထိုမျက်မှောက်တော်တွင် နာကျင်ခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်း၊ကြေကွဲခြင်းများသည်လည်း သေးငယ်သော အမှုန်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး၊ အရာရာတွင်ချစ်ခြင်း၊ သီးခံခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းများသည် ထိုမျက်မှောက်တော်တွင်ရှိသည်။
#Rev Dr Dam Suan Mung
Copyright ©2018 Full Gospel Assembly, Myanmar. All Rights Reserved
Tuesday, 5, Jun
Tuesday, 22, May
Friday, 18, May
Monday, 14, May
Wednesday, 2, May
Sunday, 29, Apr